युरोकप: इटाली र इंग्ल्यान्डबीच भिडन्त, कस्ले जित्ला ?
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। युरोकपको आज हुने फाइनलमा इटाली र इंग्ल्यान्डमध्ये कस्ले जित्ला ? इटाली र इंग्ल्यान्ड दुवैको इतिहास र वर्तमान केलाउँदा ठोकुवा गर्न सजिलो छैन । इंग्ल्यान्ड उपाधिको लामो खडेरी मेट्न आतुर छ । ऊसँग क्षमतावान् खेलाडी र बलियो टिम छ । इटालीसँग फुटबलको बलियो इतिहास छ । फुटबल भनेपछि मरिहत्ते गर्ने इटालीवासीको हौसला पनि छ ।
फिफा वरियतामा इंग्लायन्ड चौंथो र इटाली सातौं नम्बरमा छन् । यसकारण पनि दुई टोलीको स्तरमा खासै फरक छैन । तर, खेल्ने शैली भने निकै फरक छ । फुटबलमा इतिहास इटालीको पक्षमा छ । इटाली ४ पटक विश्वकप विजेता राष्ट्र हो । सन् १९३४, १९३८, १९८२ र २००६ मा इटालीले विश्वकप जितेको छ । त्यसैले फुटबलमा इटालीको गर्वलायक इतिहास छ । तर, गत विश्वकपमा इटाली छनोट नै भएन । सन् २०१० र २०१४ को विश्वकपमा समूह चरणबाटै बाहिरियो । तर, यसपटक रोबर्टो मान्सिनीबाट प्रशिक्षित इटाली बलियो भएको छ ।
इंग्ल्यान्डले सन् १९६६ मा विश्वकप जितेयता सिनियरतर्फ फुटबलको कुनै उपाधि जितेको छैन । युरोकपको फाइनलमा पहिलोपटक प्रवेश गरेको हो । तयसैले इंग्ल्यान्ड निकै उत्साही छ । २०१८ को विश्वकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो ।
इंग्लिस प्रिमियर लिग विश्वकै लोकप्रीय र बढी लगानी भएको व्यवसायिक फुटबल हो जुन इंग्ल्यान्डमा हुन्छ । इटालीको सिरि ए पनि विश्वकै लोकप्रीय व्यवसायिक फुटबल हो । यसमा विश्वका फुटबल हस्तीहरु खेल्छन् ।
युरोकपमा इटाली र इंग्ल्यान्ड दुवैले सानदार प्रदर्शन गरेका छन् । इटालीले सेमिफाइनलमा फुटबलको अर्को महाशक्ति स्पेनमाथि जीत हासिल गरेको थियो । पेनाल्टी सुटआउटमा स्पेनमाथि जीत निकाल्दै इटाली फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । क्वाटरफाइनलमा फिफा वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेको बेल्जियममाथि २–१ को जीत निकालेको थियो । बेल्जियमलाई जितेपछि इटाली झन् उत्साही भएको छ । अन्तिम १६ मा अष्ट्रियामाथि २–१ को जीत निकालेको थियो ।
इंग्लायन्डले अन्तिम १६ मा फुटबलको अर्को महाशक्ति जर्मनीलाई पराजित गरेर देखाइसकेको छ । क्वाटरफाइनलमा युक्रेन र सेमिफाइनलमा डेनमार्कलाई पराजित गर्दै इंग्ल्यान्ड फाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।
फुटबलको महाशक्ति इंगल्यान्डसँग विश्व चर्चित खेलाडीहरु छन् । ह्यारी काने, फोडेन, स्टरलिङ, स्टोन्स जस्ता खेलाडीले इंग्ल्यान्डको राष्ट्रिय टोली भरिएको छ । उनीहरुलाई रोक्न इटालीको रक्षापंक्तिलाई मुश्किल पर्न सक्छ ।
युरोकपका दौरान इंगल्यान्डको खेल झन् निखारिदै गयो । उसले इटालीमाथि जीत हासिल गरेर उपाधिको प्यास मेट्न खोजिरहेको छ । तर, इटालीको छिटो आक्रामण गर्ने रणनीतिलाई इंग्ल्यान्डले कस्तो योजनाबाट असफल बनाउने हो ? यसले नै जीत हारको निर्धारण हुनसक्छ ।